Hlola Isu Lakho Lokuqukethwe nge-Google Search Console | Martech Zone
NgoLwesine, ngoMashi 5, 2009 NgoLwesine, ngo-Okthoba 23, 2014 Douglas Karr
Abantu abaningi bayazi I-Google Search Console ngokulethwa kwamasayithi nokuqinisekisa amarobhothi amafayela, Amamephu amasayithi nokukhomba. Abenele abantu abasebenzisa izibalo zokusesha ukuthola isu elicacile lokuqukethwe kwesayithi labo, noma kunjalo.
Zulalela ku Izibalo> Imibuzo ephezulu yokusesha futhi uzothola igridi emnandi yedatha:
Ohlangothini lwesobunxele lwegridi kukhona Imibuzo yokusesha ephezulu ngebhulogi yakho. Lokhu ukufakwa kuhlu kwamagama angukhiye aphezulu noma amabinzana kanye nendawo yeposi lakho noma ikhasi kumphumela.
Ngakwesokudla kwegridi kukhona imigomo yangempela eyayikhona uchofoze-ngokusebenzisa kuqhubeke kanye nesilinganiso sabo sokuchofoza (CTR). Lolu ulwazi oluvelele!
Ingabe lawa ngamagama angukhiye ofisa ukuthi inkampani yakho, isayithi noma ibhulogi yakho ivele? Uma kungenjalo, ungahle uthande ukucabanga kabusha okuqukethwe kwakho bese uqala ukukukhomba kakhulu.
Uma ubekwe kahle kumagama angukhiye athile kepha izibalo zakho zokuchofoza azizinhle kakhulu, udinga ukusebenzela izihloko zakho zeposi bese uthumela izingcaphuno nezincazelo ze-meta). Lokhu kusho ukuthi awunazo izihloko eziphoqayo nokuqukethwe - abantu babona isixhumanisi sakho kodwa abachofozi kuso.
Usezingeni kahle emphumeleni wosesho ayiyona ukuphela komsebenzi wakho. Ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kubhalwe kahle ngokwanele ukuthi abantu bachofoze kukho kubaluleke kakhulu!
Tags: Ukukhangisa Okuqukethweabaphathi bewebhu be-googleamakhasi aphezuluimibuzo ephezulu yokuseshawebmasters
Mar 5, 2009 ku-5: 03 PM
Ngabe uthande ukuthi ungene emininingwaneni eminingi yokuthi ungayisebenzisa kanjani leyo mininingwane. Usizo lwe-GW alusizo konke okusizayo.